ဇူလိုငျ, 1908 ။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုမီးသို့မဟုတ်မီးလျှံ၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. ဘာမှပြောပြနိုင်ပါသလား? ဒါဟာအမြဲတမ်းအများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အရာဖြစ်ပုံရသည်သိရသည်။ ငါသိပ္ပံနည်းကျစာအုပ်တွေထဲကနေမျှကျေနပ်သတင်းအချက်အလက်ရနိုင်တယ်။
မီးသည်ကိုယ်ခန္ဓာအားလုံးရှိတက်ကြွစွာအားဖြည့်မောင်းနှင်စေသောဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ မီးမရှိလျှင်အားလုံးအလောင်းများကိုရွေ့လျား။ မရသည့်အရာအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ မီးဆိုသည်မှာကိုယ်ခန္ဓာ၏အမှုန်များကိုပြောင်းလဲရန်တွန်းအားပေးသောခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုစီ၌ဖြစ်သည်။ လူတွင်မီးသည်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုမူသည်။ မီး၏အစိတ်အပိုင်းသည်အသက်ရှုခြင်းနှင့်သွေးထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ ၎င်းသည်သွေးမှသယ်ဆောင်သွားသောစွန့်ပစ်သည့်တစ်ရှူးများကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။ အပေါက်များ၊ အဆုတ်များနှင့်အူလမ်းကြောင်းတူးမြောင်းစသည်တို့ကိုထုတ်လွှတ်သည့်လမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ဖယ်ထုတ်ပေးသည်။ မီးသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏နက္ခတ်တာရာ၊ မော်လီကျူးနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ဤစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပူဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မီးနှင့်အောက်စီဂျင် - မီးသည်ထင်ရှားသောစုစုပေါင်းကိုယ်ခန္ဓာ - အလိုဆန္ဒများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဒေါသအမျက်ထွက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ၎င်းသည်နက္ခတ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေ။ အာရုံကြောအင်အားကိုအသုံးချသည်။ ထိုသို့သောမီးအရေးယူမှုသည်အခြေခံအားဖြင့်သဘာဝလှုံ့ဆော်မှုအရဖြစ်သည်။
နောက်မီးတစ်ခုရှိသေးသည်။ စစ်မှန်သော alchemical မီးသည်စိတ်ထဲ၌ရှိသောမီး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမီးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် elemental မီးများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကိုခုခံတွန်းလှန်ပြီး၎င်းတို့အားစိတ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်းအသိဉာဏ်ရှိသောဒီဇိုင်းနှင့်ကိုက်ညီစေရန်လှုံ့ဆော်သည်။ လူအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသောအခါအလိုဆန္ဒ၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အမျက်ဒေါသတို့၏မီးသွေးများသည်စကြဝuniversalာစိတ်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုခံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်စုံတစ် ဦး ချင်းမဟုတ်သောသဘာဝ၊ စိတ်၊ ဘုရားသခင်၊ လူသားတစ် ဦး သည်စိတ်တစ်ခုအနေနှင့်အခြေခံအားဖြင့်မီးလောင်မှုကိုပြုမူ။ အသိဉာဏ်ရှိသောဒီဇိုင်းနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပေါင်းစပ်မှုအသစ်များသို့ ၀ င်ရောက်စေသည်။ အတွေးနှင့်အတွေးဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏မီးနှင့်အခြေခံအရာများအားမမြင်ရသောကမ္ဘာများ၌ပေးသည်။ မမြင်ရသောကမ္ဘာများရှိဤအတွေးအခေါ်များသည်စုစုပေါင်းကိစ္စကိုအတင်းအဓမ္မလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးသည်။
မီးနှင့်မီးလျှံ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများမှာ၎င်းတို့သည်ပူပြင်းခြင်း၊ ခဏမျှမပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၊ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အခြားဖြစ်ရပ်များနှင့်မတူ၊ ၎င်းတို့သည်အလင်းပေးသည်၊ မီးခိုးဖြစ်စေသည်၊ သူတို့ကိုပြာအဖြစ်လျှော့ချလိုက်ခြင်းအားဖြင့်၊ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာကမီးတောက်ကနေတဆင့်မီးကပျောက်သွားသလိုရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်။ ငါတို့တွေ့မြင်သောမီးသည်စုစုပေါင်း ၀ တ္ထုများဖြင့်ချုပ်နှောင်ထားသည့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏စိတ်ဓာတ်ကိုလွတ်မြောက်စေပြီးမူလမူလအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာတွင်မီးသည်လွတ်လပ်ပြီးတက်ကြွသော်လည်း၊ involution အားဖြင့်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေစဉ်တွင်မီး၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလျှော့ချ။ ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် ၀ ိညာဉ်အသေကောင်များအတွင်း၌ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အားလုံးကိုယ်ခန္ဓာ၌စိတ်ဝိညာဉ်။ ကျနော်တို့မီးလျှံလောင်ကျွမ်းသောမီးဖြင့်ခေါ်ဝေါ်နိုင်သည်။ ဤလျှို့ဝှက်မီးသည်သဘာဝနိုင်ငံအားလုံးတွင်ရှိသည်။ ငုပ်လျှိုးနေသည့်မီးသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီ၏ဌာနအချို့တွင်တူညီသောနိုင်ငံ၏အခြားဌာနများထက် ပိုမို၍ လှုပ်ရှားသည်။ ၎င်းကိုဓာတ်သတ္တုတွင်းရှိမီးကျောက်နှင့်ဆာလဖာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နိုင်ငံရှိသစ်သားများ၊ ကောက်ရိုးများနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်ခန္ဓာရှိအဆီနှင့်အရေပြားများကပြသသည်။ ငုပ်လျှိုးနေသည့်မီးသည်ရေနံကဲ့သို့သောအချို့အရည်များတွင်လည်းရှိသည်။ မီးလောင်လွယ်သောခန္ဓာကိုယ်သည်အကျဉ်းထောင်မှငုပ်လျှိုးနေစေရန်နှင့်တက်ကြွစွာမီးလောင်ရန်လိုအပ်သည်။ အဖြစ်မကြာမီ evoked အဖြစ်, ငုပ်လျှိုးနေမီးသည်ခဏမြင်နိုင်ဖြစ်လာ, ပြီးတော့သူကလာရာကနေမမြင်ရသောကမ္ဘာသို့ဖြတ်သန်းသွားသည်။
မီးသည်မှော်အတတ်အားလုံးကိုသိသောအချက်လေးချက်အနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးသည်အရာဝတ္ထုတို့တွင်အများဆုံးသောမှော်အတတ်ဖြစ်သည်။ မီး၊ လေ၊ ရေနှင့်ကမ္ဘာမြေဟုလူသိများသောဒြပ်စင်တစ်ခုမျှမျက်စိထဲသို့မမြင်ရပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အများအားဖြင့်ကမ္ဘာ၊ ရေ၊ လေ၊ မီးကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောဒြပ်စင်များ၏အနိမ့်ဆုံးအဆင့်များသို့မဟုတ်ရှုထောင့်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာများကိုတည်ဆောက်ရာတွင်၎င်းဒြပ်စင် (၄) ခုစီသည်တစ်ခုချင်းစီကိုလိုအပ်ပြီး၎င်းဒြပ်စင်တစ်ခုစီသည်အခြားအရာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာအမှုန်တစ်ခုစီသည်ဒြပ်စင်လေးခုကိုအချို့သောအချိုးအစားများဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသဖြင့်၎င်းဒြပ်စင်လေးခုချင်းသည်ပေါင်းစပ်ခြင်းပြတ်တောက်သည်နှင့်၎င်း၏မူလအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။ မီးဆိုသည်မှာများသောအားဖြင့်ပေါင်းစပ်မှုများကိုဖြိုခွဲပြီးပေါင်းစပ်ထဲသို့ ၀ င်သောဒြပ်ပေါင်းများကိုမူလအခြေအနေသို့ပြန်သွားစေသည်။ မီးလောင်ကျွမ်းသောအခါ၎င်းသည်မီးလောင်လွယ်သောကိုယ်ခန္ဓာ၏အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကွယ်ပျောက်သွားသည်။ ၎င်းကိုဖြတ်သန်းသောအခါလေ၊ ရေနှင့်ကမ္ဘာမြေ၏ဒြပ်စင်များကိုသူတို့၏အရင်းအမြစ်များစွာသို့ပြန်သွားစေသည်။ ပြန်လာတဲ့လေနဲ့ရေကိုမီးခိုးထဲမှာတွေ့ရတယ်။ လေထုဖြစ်သည့်အခိုးအငွေ့နှင့်တုန်ခါနေသည့်အများအားဖြင့်သတိပြုမိသောမီးခိုးငွေ့၏အစိတ်အပိုင်းသည်မကြာမီမမြင်ရသောဖြစ်လာသည်။ ရေဖြစ်သည့်မီးခိုးငွေ့အစိတ်အပိုင်းသည်အစိုဓာတ်အားဖြင့်ဒြပ်စင်ရေထဲသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးလေထဲတွင်လည်းဆိုင်းငံ့ထားသည်။ ကျန်ရှိနေသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်မြေမှုန့်နှင့်ပြာထဲတွင်အများဆုံးဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ငုပ်လျှိုးနေသည့်မီးအပြင်အခြားဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့မိသောအချို့ဓာတုပစ္စည်းများ၊ သွေးမှစုပ်ယူသောအောက်စီဂျင်နှင့်အစားအစာများကိုအစာကြေစေသောအချဉ်ဓာတ်များကြောင့်ဓာတုမီးလောင်သည်။ ထိုအခါအတွေးကထုတ်ပေးသော alchemical မီးရှိ၏။ အတွေး၏ Alchemical မီး၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလုံးဝအတွေးများ၏ alchemical မီးဖြင့်, ဝိညာဉ်ရေးရာမျှော်မှန်းချက်သို့ထပ်မံသန့်စင်ခြင်းနှင့် sublimated သောအလွန်မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ၏အလိုဆန္ဒ, သို့ကူးစက်ခံရဖို့ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့နောက်ဝိညာဉ်ရေးမီးသည်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အတွေးအခေါ်အားလုံးကိုအသိပညာအဖြစ်လျှော့ချပြီးမသေနိုင်သောဝိညာဏခန္ဓာကိုတည်ဆောက်သည်။
မီးလောင်ကျွမ်းစေသည့်အကြောင်းအရင်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ဤအကြောင်းရင်းများကိုမီးလောင်ကျွမ်းမှု၏ချက်ချင်းအကြောင်းရင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းမှာမီးလျှံမပေါ်မီကပင်ဒြပ်စင်၏တည်ရှိမှုဖြစ်သည်။ မီးသည်ဒြပ်စင်တစ်ခုအနေဖြင့်အခြားဒြပ်စင်များ၊ မီးဘေးလေသို့မဟုတ်အခြားလေယာဉ်များနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်ကိုနားလည်သင့်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်များ၏ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်တိကျသောရလဒ်များကိုရ။ Fire element သည်အင်အားကြီးမားစွာဖြင့်တည်ရှိပါက၎င်းသည်အခြားဒြပ်စင်များကိုလွှမ်းမိုးကာ၎င်း၏အလွန်အင်အားကြီးမားသောရှိနေခြင်းအားဖြင့်၎င်းကို ignition သို့တွန်းပို့သည်။ မီးသတ်ဒြပ်စင်များရှိနေခြင်းသည်အိမ်နီးချင်းအလောင်းများတွင်မီးလောင်စေသည်။ အကူးအပြောင်းမီးတောက်အားဖြင့်အကျဉ်းကျခံနေရသောမီးသတ်ဒြပ်စင်သည်မူလအရင်းအမြစ်သို့ပြန်သွားသည်။ ခုန်စေသောမီးလျှံသည်မီးဖြင့် သုံး၍ ဤလောကသို့မီးလျှံမှဝင်ရောက်ရန်လှုံ့ဆော်သည်။ မီး - ဒြပ်ထုသည်လေထုကိုလုံလောက်သောအင်အားဖြင့်လွှမ်းမိုးသောအခါမီးလောင်လွယ်သောအရာအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်သည်။ ထို့နောက်ပွတ်တိုက်မှုကဲ့သို့သောအပြင်းထန်ဆုံးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဤကိစ္စသည်မီးတောက်လောင်ကျွမ်းသွားသည်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသသို့မဟုတ်တောမီးလောင်မှုသည်ခရီးသည်တစ် ဦး ၏မီးဘေးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ နေဝင်နေသောနေရောင်ခြည်များကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မီးလောင်ခြင်းသည်မြို့ကြီးတစ်မြို့၏မီးလောင်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ တစ် ဦး ကမကြာခဏသတိပြုမိကောင်းပြုမိနိုင်သည်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေများအောက်တွင်မီးလောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်လုံးဝပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲပြတ်တောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီးနောက်မှတောက်ပနေသောမီးခြစ်ဆံကိုသင်္ဘောကျင်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာကမျှမထင်ရသည့်ကြီးမားသောအဆောက်အအုံ၏ရှင်းလင်းသောကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အလွယ်တကူလောင်ကျွမ်းနိုင်သောပစ္စုပ္ပန်၊ မီးတောက်ပနေသောမီးခြစ်နှင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်အလျင်အမြန်ပျံ့နှံ့သွားသောကြောင့်အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကိုမြေကြီးပေါ်သို့လောင်ကျွမ်းစေခဲ့သည်။ မြို့ကြီးများကိုလောင်ကျွမ်းစေသည့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုသည်အဓိကအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်မီးခိုးငွေ့များရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားအကြောင်းရင်းများကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
အလိုအလျောက်လောင်ကျွမ်းခြင်းသည်အလွယ်တကူမီးလောင်လွယ်သောအရာများကိုအောက်စီဂျင်နှင့်ပေါင်းစည်းသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ သို့သော်အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာမီး - ဒြပ်စင်ကိုစွဲမက်စေသောပconflictိပက္ခဖြစ်လွယ်သောပစ္စည်းများပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရေနံနှင့်အဝတ်စများကဲ့သို့မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများနှစ်ခုအကြားပွတ်တိုက်မှုအားဤကိစ္စသည်ရုတ်တရက်လေထုထဲတွင်အောက်စီဂျင်နှင့်ပေါင်းစည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပစ္စည်းကိုမီးတောက်အဖြစ်စတင်စေသောမီး - ဒြပ်စင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မည်သို့ရွှေ, ကြေးနီ, ငွေကဲ့သို့သောသတ္တုများကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသနည်း
တစ်ခါတစ်ရံတွင်မြင့်မြတ်သောသတ္တုများဟုခေါ်သောသတ္တုများရှိသည်။ ဤအရာတစ်ခုစီသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာကာသထဲတွင်မြင်တွေ့ရသောဂြိုဟ်များနှင့်အလင်း၏အလောင်းခုနစ်လုံးအနက်မှတစ်ခုမှထွက်ပေါ်လာသည့်မိုးရွာသွန်းမှုစွမ်းအား၊ အလင်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဂြိုဟ်များခေါ်ဆိုသောထိုအရာ ၀ တ္ထုများ၏စွမ်းအားသို့မဟုတ်အလင်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးသည်ကမ္ဘာကို၎င်း၏လနှင့်ဆွဲဆောင်သည်။ ထိုအင်အားစုများသည်သက်ရှိများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းကိုဒြပ်စင်များသို့မဟုတ်ဂြိုလ်များ၏ဒြပ်ဝတ္ထုများဟုခေါ်သည်။ လနှင့်တကွကမ္ဘာမြေသည်အခြေခံအားဖြင့်အင်အားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပုံစံကိုပေးသည်။ ၎င်းသတ္တုသည်အဆင့် (၇) ဆင့် (သို့) ဒီဂရီကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၄ င်းဒြပ်စင်သည်သဘာ ၀ သယံဇာတများကိုကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာ ၀ သဘာ ၀ သို့မကူးပြောင်းမီ၎င်းသတ္တုများကိုဖြတ်သန်းရမည်။ သတ္တုခုနစ်လုံးတပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုမှုများစွာရှိသည်။ ရောဂါများကိုသတ္တုများအသုံးပြုခြင်း (သို့) အလွဲသုံးစားပြုခြင်းတို့ကြောင့်ရောဂါကူးစက်နိုင်သည်။ ၎င်းသတ္တုသည်အသက်ကိုပေးသကဲ့သို့သေစေနိုင်သောအရည်အသွေးများလည်းရှိသည်။ အချို့သောအခြေအနေများပေါ်ပေါက်လာပါကယင်းတို့ထဲမှတစ်ခုခုကိုသတိရှိရှိဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ၎င်းသည်သတ္တုများမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်သောအခြေခံအင်အားစုများကိုပြည်နယ်မှစနစ်တကျတိုးတက်မှုရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်အလက်များကိုအပိုင်ရရှိခဲ့ကြသော်လည်းသတ္တုများ၏တိုးတက်မှုအမိန့်နှင့်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောသီလများကိုအစဉ်လိုက်ပေးရခြင်းမှာအဆင်မပြေမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီအမိန့်အားလုံးကိုလူပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့်အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်းနိုင်ဘူး; အဘယ်အရာကိုတ ဦး တည်း၏အကျိုးအတွက်လျှောက်ထားလိမ့်မယ်အခြားဆိုးရွားလိမ့်မယ်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်တူညီသောအစီအစဉ်အရတည်ဆောက်ထားသော်လည်းသူ၏ဖွဲ့စည်းမှုတွင်သတ္တု၏ဝိညာဉ်သတ္တိနှင့်ကိုက်ညီသည့်အရည်အသွေးအချို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက်အချို့သည်အကျိုးရှိသည်၊ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်ရွှေသည်သတ္တုများအကြားတွင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်နေသည်။ ရည်ညွှန်းထားသောသတ္တုခုနစ်ခုသည်သံဖြူ၊ ရွှေ၊ မာကျူရီ၊ ကြေးနီ၊ ခဲငွေနှင့်သံတို့ဖြစ်သည်။ ဤစာရင်းကောက်ယူခြင်းကိုတိုးတက်မှုအစဉ်အလာသို့မဟုတ်ပြောင်းပြန်အဖြစ်မယူသင့်ပါ။
အတိတ်ကာလများတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောဒြပ်စင်များကိုယခုအချိန်တွင်အသုံးမပြုကြပါ။ ရွှေကိုကျွန်ုပ်တို့သတ္တုခုနစ်လုံးတွင်အဖိုးအတန်ဆုံးအဖြစ်ယူမှတ်သော်လည်း၎င်းသည်အသုံးမဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်ထက်သံကိုလွယ်ကူစွာလွယ်ကူစွာဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ သတ္တုများအနက်သံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့ယဉ်ကျေးမှုအတွက်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏အဆင့်ဆင့်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ မြင့်မားသောအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရေငုပ်သင်္ဘောများအသုံးပြုခြင်း၊ ရထားလမ်းများ၊ အင်ဂျင်များ၊ ကိရိယာများ၊ ။ ၎င်းသည်အလှဆင်ပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်ဆေးပညာတွင်တန်ဖိုးရှိပြီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အခြားလူ့ယဉ်ကျေးမှုများသည်ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးဝါ (သို့) ကြေးနီနှင့်သံခေတ်များဟုလူသိများသည့်အချိန်ကာလအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကမ္ဘာမြေသားတို့သည်သံခေတ်တွင်ရှိနေကြသည်။ ၎င်းသည်ခက်ခဲပြီးအခြားသူများထက်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသောခေတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားအရာများထက်သံခေတ်တွင်အရာဝတ္ထုများပိုမိုလျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသောကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သောအရာသည်အခြားမည်သည့်အသက်အရွယ်ထက်မဆို ပို၍ အပြုသဘောသက်ရောက်စေသည်။ အကြောင်းအချက်များသည်အခြားမည်သည့်အသက်အရွယ်ထက်မဆိုသံဓာတ်၌သူတို့၏အကျိုးဆက်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလိုက်နာသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့တည်ထောင်သောအကြောင်းတရားများသည်အသက်အရွယ်သို့ကူးပြောင်းသွားလိမ့်မည်။ အမေရိကမှာပြိုင်ပွဲအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပြီးငါတို့ကပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။
ဤတွင်ဖော်ပြထားသောသတ္တုခုနစ်ခုသည်ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာ၏ postulated and tabulated ခုနစ်ဆယ်ထူးဆန်းသောဒြပ်စင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မည်သို့ဖွဲ့စည်းသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂြိုဟ်ခုနစ်ခုမှဖြစ်ပေါ်လာသောအင်အားစုများ၊ အလင်းများသို့မဟုတ်အရည်အသွေးများကိုကမ္ဘာကဆွဲဆောင်သည်ဟုဆိုသည်။ ကမ္ဘာမြေသည်သံလိုက်ဆွဲအားကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလက်ရှိအခြေအနေများကြောင့်ဤစွမ်းအားများသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစွမ်းအားများကိုဆွဲဆောင်ပြီးသံလိုက်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းရှိအမှုန်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အင်အား ၇ ခု၏တစ်ခုချင်းစီကို၎င်း၏အထူးအရောင်၊ အရည်အသွေးနှင့်အမှုန်များအတူတကွတည်ရှိပုံတို့ဖြင့်လူသိများသည်။ မည်သည့်သတ္တုသတ္တုကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်အချိန်ယူရခြင်းသည်အခြေအနေများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရွှေသည်လိုအပ်သောအခြေအနေအားလုံးရှိနေသောအလွန်တိုတောင်းသောအချိန်တွင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။